Ganacsatada Magaalada Nairobi oo lumisay isku dar lacag ka badann 100 milyan intii ay socdeen Dibadbaxyadii looga soo horjeeday IEBC – The Voice of Northeastern Kenya
Ganacsatada Magaalada Nairobi oo lumisay isku dar lacag ka badann 100 milyan intii ay socdeen Dibadbaxyadii looga soo horjeeday IEBC
starfmke August 2, 2016
Ganacsatada ku dhaqan amagaalada tan Nairobi ayaa lagu soo waramayaa in ay kumiyeen lacag dhan 120 Milyan oo shilinka dalka intii ay socdeen dibaxbayadii looga soo horjeeday gudiga maxadaxa banaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka ee IEBC.
Sida laga soo xigtay Ururka ganacsatada gaarka loo lee yahay ee magacooda loo soo gaabiyo KEPSA ayaa sheegtay in meeha sida aadka uu u saameeyay mudaaharadyadaasi ay tahay bangiyada dala.
Inkabadan 500 oo ganacsato oo ay kujireen darawaliinta ka xeeya mootooyinka oo la sheegay in 500 oo shilin ay weynayaan maalinta uu dhacayo mudaaharadyada sidoo kale dadka uu saameyay ayaa warbixinta lagu sheegay in ay yihiin dadka iibiya wargeysyada oo iyagana waaynayeen lacag dhan 10,000 maalin kasta.
Bangiyada iyo hay’adaha kale ee maaliyada ayaa la sheegay in iskudar ahaan ay lumiyeen Sh166,727 shantii maalin ay socdeen mudaaharadka taaso micneheedu yahay in 833,635 uu lumiyay bangi walbaba.
Dibadbaxyadan oo ay hogaaminayeen hogaamiyayaasha isbahaysiga mucaaradka ah ee Cord bishii May ee aynu soo dhafnay ayaa dadkii ka qeyb qaadanayay waxay lug kumarayeen wadooyinka waweyn ee Nairobi iyagoo ugu dambeyn kutagayay xafiiska weyn ee IEBC ay ku leedahay Anniversary Towers.
Qaar kamid ah dadkii ka qeyb qaadanayay mudaaharadkaasi ayaa ka faa’ideysanayay iyagoo dhac iyo bililiqa u geysanayay dadka wadooyinka ay ku arkaan mise ku ganacsada.
← Hay’ada IPOA oo Eedeyn dusha oga turtay OCPD-ga Magaalada Kayole
Wakiilada Countiga Garissa oo kulan la yeeshay gudiga qoondaynta dakhliga Dalka →